त्याग होस त ह्यारी र मेगनको जस्तो- शाही उपाधि त्यागेसंगै जनताको रु. ३६ करोड जनतालाई फिर्ता गर्दै::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
त्याग होस त ह्यारी र मेगनको जस्तो- शाही उपाधि त्यागेसंगै जनताको रु. ३६ करोड जनतालाई फिर्ता गर्दै
बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेघनले शाही उपाधि परित्याग गरेको औपचारिक निर्णय भएको छ । बेलायती राजदरबार बकिङघम प्यालेसको बैठकले उनीहरुको आग्रहअनुसार शाही उपाधि परित्याग गर्ने घोषणालाई औपचारिकता दिएको हो ।
ह्यारी दम्पतिले राजपरिवारको भूमिका परित्याग गरेपछि बेलायत र उत्तर अमेरिकामा आफ्नो समय बिताउने भएका छन । केही समयको प्रेम सम्वन्धपछि उनीहरुले २०१८ मा विवाह गरेका ह्यारी राजकुमार चार्सका कान्छा छोरा हुन् जो ३५ बर्षको भए भने उनकी श्रीमती मेघन ३८ बर्षकी छन् । राजकुमार ह्यारी बेलायती राजपरिवारको छैठौँ उत्तराधिकारी थिए ।
ह्यारी समाजसेवा गर्न भनि नेपालमा समेत आएका थिए ।
त्याग होस त ह्यारी र मेगनको जस्तो
त्यो दरवारको सान सौकत सुख सयल राजश्री सम्मान अरु के के यधपी प्रेम तथा निजि स्वतन्त्रताको लागी ह्यारीले दरबार त्याग गरे मेगनले यो दुनियामा धेरै कम महिलाले प्राप्त गर्ने सुख सयल सम्मान त्याग गरि एक आम नागरिक बन्ने र निजि जिबन जिउने निधो गरिन । एक बेलायती अनलाइनाका अनुसार अझ गजब त आफ्नो निवास पुनर्निर्माणको लागी खर्च भएको २४ लाख ४० हजार पाउन्ड अर्थात् लगभग ३६ करोड नेपाली रुपैयाँ फिर्ता गर्ने घोषणा समेत गरे। उक्त रकम जनताको करबाट जम्मा भएको हुँदा फिर्ता गर्न चाहेको बिचार दिए।
यता हाम्रोमा भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखी मन्त्री आदि सबैले आजिवन राज्यले पाल्नु पर्ने, सवारी साधन र तेल समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने, पत्रीका समेत राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने, खरबौ सम्पत्ति भए पनि राज्यकोषबाट उपचार हुनु पर्ने त छँदै थियो अझै तेतिले नपुगी हरेक बर्ष बरिष्ठहरुको सेवा सुबिधा नाममा सेवा सुबिधा वृद्धि गरिदै छ।
विश्वका आम जनताको ह्यारी र मेगन प्रति उच्च सम्मान त थियो नै अहिले त झन ह्वात्तै बढेर आयो ।